BOOTABLE USB FLASH DRIVE WINDOWS 10 NA MAC - IOS NA MACOS - 2019
Ntuziaka a na-akọwa otú ị ga-esi mee ka Windows 10 USB flash drive na Mac OS X wụnye usoro ma na Boot Camp (ya bụ, na ngalaba dị iche na Mac) ma ọ bụ na PC ma ọ bụ laptọọpụ PC. Enweghi otutu uzo iji dee ngwa ngwa Windows na OS X (n'adịghi ka Windows usoro), mana ndi di na ya di, iji zuo ezu. Ntuziaka nwekwara ike inye aka: Ịwụnye Windows 10 na Mac (ụzọ 2).
Kedu ihe bara uru maka? Dịka ọmụmaatụ, ịnwe Mac na PC, nke kwụsịrị ịkwanye na ị ga-ebigharị os, ma ọ bụ jiri ngwa USB nwere ike ịme ka ọ bụrụ disk nchekwa. Ọfọn, n'ezie, maka wụnye Windows 10 na Mac. Ntuziaka maka ịmepụta ụdị ụgbọala a na PC dị ebe a: Windows 10 boot flash drive.
Dee USB nke nwere ike iji Boot Camp Assistant
Na Mac os X, enwere ọrụ a wuru iji mepụta ngwa USB flash nwere ike iji Windows wee wụnye usoro ahụ dị iche na diski ike ma ọ bụ SSD nke kọmputa ahụ, wee họrọ Windows ma ọ bụ os X mgbe ịbọrọ.
Otú ọ dị, windo USB flash na Windows 10, nke e kere n'ụzọ dị otú a, na-arụ ọrụ nke ọma ọ bụghị nanị maka nzube a, kamakwa maka ịwụnye OS na PC nkịtị na laptọọpụ, ị pụkwara ịkwalite ya na usoro Legacy (BIOS) na UEFI - na ma ikpe, ihe niile na-aga nke ọma.
Jikọọ drive USB na ikike nke ọ dịkarịa ala 8 GB gị Macbook ma ọ bụ iMac (na, ma eleghị anya, Mac Pro, onye edemede kwukwara na-eji nlezianya). Mgbe nke ahụ gasịrị, malite usoro "Boot Camp" na Nchọpụta Nchọpụta, ma ọ bụ malite "Onye Nlekọta Mgbasa Boot" site na "Mmemme" - "Ndị Ọrụ".
Na Boot Camp Assistant, họrọ "Mepụta windo diski Windows 7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị." O bu ihe nwute, wepu "Download ngwa ngwa nkwado Windows" site na Apple "(a ga-ebudata ya na Intanet ma were obere ntakiri) agagh acho oru, obuna na ichoro ngwa mkpofu maka nbudata na PC. Pịa "Nọgidenụ."
N'elu ihuenyo ọzọ, kọwaa ụzọ nke ihe oyiyi ISO nke Windows 10. Ọ bụrụ na ịnweghị otu, mgbe ahụ, ụzọ kachasị mfe iji budata mbido ihe oyiyi mbụ bụ nke esi akọwa Windows Windows 10 site na weebụsaịtị Microsoft (ụzọ nke abụọ dị mma maka nbudata na Mac site na iji Microsoft Techbench ). Họrọ kwa USB flash njikọ maka ndekọ. Pịa "Nọgidenụ."
Ị ga-echere ruo mgbe a depụtaghachiri faịlụ ahụ na ụgbọala, yana nbudata na ntinye nke software Apple na otu USB (n'oge usoro ahụ, ịnwere ike ịrịọ nkwenye na paswọọdụ nke onye ọrụ OS X). Mgbe ị kwusịrị, ị nwere ike iji kọmputa USB nwere ike ịmepụta na Windows 10 na ihe ọ bụla kọmputa. Ọzọkwa, a ga-egosi gị ntụziaka maka ịkwalite si na nke a na Mac (jide nhọrọ ma ọ bụ Alt na reboot).
UEFI bootable USB flash drive na Windows 10 na Mac os X
Enwere ụzọ ọzọ dị mfe iji dee Windows flash na Windows 10 na kọmputa Mac, ọ bụ ezie na ụgbọala a bụ naanị maka nbudata ma wụnye na PC na laptọọpụ na nkwado UEFI (na batrị EFI). Otú ọ dị, ọ nwere ike ịnwe ihe ọ bụla ngwaọrụ nke oge a, wepụtara na afọ atọ gara aga.
Iji dee n'ụzọ dị otú ahụ, dịka dị na ikpe gara aga, anyị ga-achọ ụgbọala n'onwe ya na onyinyo ISO nke anwụrụ na OS X (pịa okpukpu abụọ na faịlụ onyinyo ma ọ ga-eburu ya aka).
A ghaghị ịhazi usoro ịgba ọsọ ọsọ na FAT32. Iji mee nke a, gbasaa usoro ihe omume "Njirimara Disk" (iji nchapu Nchọpụta ma ọ bụ site na Mmemme - Ọrụ).
Na ihe nchekwa disk, họrọ eriri USB USB ejiri n'aka ekpe, wee pịa "ehichapụ". Jiri MS-DOS (FAT) na Nhazi Boot Record nkebi oge dịka usoro nhazi (a ga-edekwa aha na Latin kama Russian). Pịa "Ihichapu."
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ naanị iṅomi ọdịnaya nile nke onyinyo ahụ ejikọtara site na Windows 10 na USB flash drive. Ma, e nwere otu ọgba ọsọ: ọ bụrụ na ị jiri Onye Nchọta maka nke a, mgbe ahụ, ọtụtụ ndị na-enweta njehie mgbe ị na-edegharị faịlụ nlscoremig.dll ma terminaservices-gateway-package-replacement.man na koodu njehie 36. Ị nwere ike idozi nsogbu ahụ site na ịpụta faịlụ ndị a n'otu n'otu, ma enwere ụzọ na ọ dị mfe iji osom X nke OS (mee ya otu ụzọ ị si arụ ọrụ ndị ọzọ).
Na njedebe, tinye iwu ahụ cp -R path_to_mounted_image / path_to_flashke ma pịa Tinye. Ka ị ghara ide ma ọ bụ ịkọ ụzọ ndị a, ị nwere ike ide naanị akụkụ mbụ nke iwu ahụ na ọnụ (cp -R na oghere na njedebe), wee dọrọ na dobe diski nkesa Windows 10 (desktọọpụ desktọọpụ) na windo windo, na-agbakwụnye na edebanye aha slash "/" na ohere (choro), wee - igwe mbanye (ebe ịkwesighi itinye ihe ọ bụla).
Ogwe ọganihu ọ bụla agaghị apụta, ọ dị mkpa ka ichere ruo mgbe edere faịlụ niile na USB flash drive (nke a nwere ike ijide 20-30 nkeji na ngwa ngwa draịva USB) na-enweghị mmechi Terminal ruo mgbe mkpali maka ịbanye iwu gosipụtara ọzọ.
Mgbe ị kwusịrị, ị ga-enweta ngwa nrụnye USB dị njikere na Windows 10 (ntọala folda nke kwesịrị igosipụta na nseta ihuenyo n'elu), site na nke ị nwere ike wụnye os ma ọ bụ jiri usoro Weghachite na kọmputa na UEFI.